Chii chinonzi chibvumirano chekutora mhuka? | Noti Katsi
Chii chinonzi chibvumirano chekutora mhuka?
Kana tave kuzotora mhuka, tisati taenda nayo kumba, vanozoita kuti tisaine chibvumirano chekutora. Gwaro iri rine huchokwadi hwepamutemo uye richabatsira zvakanyanya, kune anotora uye kunzvimbo inochengeterwa mhuka iyo kusvika zvino yaive ichitarisira iyo furry. Asi, Chii chaizvo?
Kana iwe uine kusahadzika pamusoro penyaya iyi uye usingade kushamisika, ipapo ini ndichaedza kuzvigadzirisa zvese 🙂.
Chibvumirano chekutora ndeye zviri pamutemo uye zvinosunga zvinyorwa kuti zvese mudziviriri uye anogamuchira chiratidzo panguva iyo mhuka inogamuchirwa. Inotaura zvibvumirano zvakaitwa, senge:
Mari yekurera iyo iyo anorera anofanira kubhadhara
Kuzvipira kwemunhu anotora, senge kuendesa mhuka kana isingakwanise kuitarisira, zivisa kana ikachinja kero yayo nekuichengeta zvakanaka
Naizvozvo igwaro rakakosha kwazvo, nekuti izvo zvinotarisirwa ndezvekuti mhuka inozopedzisira yave mumaoko akanaka kwete kune asina. Nenzira iyi, zvinodzivirirwa kuti zvinopedzisira zvasiiwa kana kushandiswa kune zvimwe zvisingabvumirwe zvinangwa, sekuberekesa.
Zvisinei, Kuti ive ichinyatsoshanda, dhata rese rekuchengetedza rinofanira kuverengerwa (CIF; yakanyoreswa hofisi, yemubatanidzwa nhamba yekunyoresa), chitupa cheiye anotora pamwe nekero yake, pamwe mapato ese anofanira kuasaina. Saizvozvowo, zvinokurudzirwa kuti pamwe nechibvumirano chibodzwa chemhuka kana kadhi rekudzivirira rinoendeswa rinosimbisa chimiro chehutano hwemhuka.
Zvakadaro, isu tinogona kutora shamwari yedu nyowani kumba uye kumuchengeta iye sezvaanofanirwa. Ehe, isu tinofanirwa kuziva kuti kana tikazvibata zvisina kunaka, tichiregeredza kana kusazvikanda mukati menguva yakatemwa, mudziviriri ane kodzero zviri pamutemo yekuwanazve mhuka.
Zvanga zvichikufadza here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Kugamuchirwa » Chii chinonzi chibvumirano chekutora mhuka?
Kuziva sei kana katsi iri kufa
Kwokuisa kupi feeder katsi?